Voatabia Cherry: Ny tombontsoa valo lehibe | Nutri Diet
Ny tombony valo an'ny voatabia serizy
Michael Serrano | | sakafo, fahasalamana
Sakafo tena mahaliana ny voatabia serizy. Amin'ny ankapobeny dia mamy kokoa noho ny voatabia lehibe kokoa, ny fihinanana azy dia maneho tombony betsaka amin'ny fahasalamana. Ho fanampin'izany, afaka mahita azy ireo ao amin'ny fivarotana lehibe mandritra ny taona ianao.
Fangaro ilaina be dia be, ity karazana voatabia ity dia hanome tsiro tena tsara amin'ny hena, trondro, salady ary paty. Ankoatry ny dia hanampy anao hamorona lovia mahasalama sy maivana, toy ny toast na toho. Betsaka ny antony hitiavanao an'io sakafo kely io.
1 Inona ny voatabia serizy?
2 Toetra voatabia Cherry
3 Kaloria voatabia Cherry
5 Inona no anjara biriky voatabia serizy?
6 Tombony voatabia Cherry
Inona ny voatabia serizy?
Voatabia kely, tsotra sy tsotra izy io. Izy ireo dia mety ho kely toy ny tendron'ny ankihibe, raha ny haben'ny ambony indrindra azon'izy ireo dia ny baolina golf. Mora tokoa ny mihinana ary, na eo aza ny halavany, dia sakafo matsiro sy mahavelona izy.
Eo amin'ny ankamaroan'ny supermarket, ity voatabia ity manana ny anarany amin'ny teny Anglisy amin'ny fitoviana amin'ny serizy. Na izany aza, tsy dia spherical sy mena foana no misy azy. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny endrika sy loko maro hafa, saingy mitazona foana izany endrika manintona izany. Zavatra iray izay ny fahavononany hihinana am-pitoniana amin'ny manaikitra iray dia mandray anjara betsaka (irery na miaraka amin'ny menaka sy sira kely).
Toetra voatabia Cherry
Satria kely kokoa izy ireo, dia mety hieritreritra ianao fa tsy dia mahavelona toy ny voatabia mahazatra. Fa tsy toy izany. Raha ny tena izy, raha resaka sakafo, ny voatabia serizy dia tsy tokony hialona ireo zokiny lahy.
Raha resaka vitamina, anisan'izany ireo ao anaty sakafo dia manome antoka a fatra tsara vitamina A, C ary K isan'andro. Mahaliana ihany koa ny fandraisany anjara amin'ny vitamina B, toy izany koa ny vitamina B6 sy B9. Mety ho fantatra amin'ny anarany hafa ity farany: folic asidra.
Tsara ny manamarika fa, ankoatry ny vitamina dia voatabia serizy ihany koa mahaliana ny potasioma sy ny manganese no manondro azy. Amin'ny isa kely kokoa, ity sakafo ity dia manome mineraly hafa, ao koa ny calcium, vy ary ny zinc.
Kaloria voatabia Cherry
Betsaka ny olona no mila mitazona ny isan'ny kaloria ao amin'ny sakafony. Raha iray amin'izy ireo ianao dia hahaliana anao ny hahafantatra izany Sakafo kely kaloria ny voatabia serizy ary zara raha misy tavy ao anatiny. Ny voatabia serizy 100 grama dia tsy manome afa-tsy kaloria 18, vola izay tsy dia mila fotoana firy raha esorina ny fanatanjahan-tena.
Raha atambatra ny fatran'ny kaloria ambany miaraka amin'ny fahaizany maro, ny tsiro ary ny fananana, dia tsy mahagaga raha raisina izany safidy tsara ho an'ny sakafo mampihena lanja, ary koa ny fanomanana ny karazana lovia matsiro sy mahasalama.
Ny voatabia serizy mahazatra indrindra, ary ampifandraisina amin'ny ankapobeny, dia ny mena sy ny spherical. Na izany aza, araka ny hita amin'ny ankamaroan'ny supermarket, ity sakafo ity dia afaka manana endrika sy loko maro hafa ankoatr'ireo.
Ho fanampin'ireo mena, Ny voatabia serizy dia misy amin'ny loko hafa, toy ny maitso, mavo, mainty mena ary volomboasary. Misy karazany maro, ary ny tena zava-dehibe, ny haavon'ny mamy sy ny asidra dia samy hafa amin'ny tsirairay. Ny sasany, toy ny mavo miendrika poara, dia tsara ho an'ny olona tsy mahazaka ny hamaroan'ny voatabia lehibe.
Ny karazana isan-karazany dia hanampy anao hanome endrika hafa amin'ny loviao. Amin'izao fomba izao, tsara ny manao fikarohana mba hahalalanao hoe iza amin'ireo no tadiavinao. Ary ahoana no itiavanao azy ireo indrindra rehefa mametraka azy ireo ao am-bavanao (manta, natsatsika, maina ...).
Inona no anjara biriky voatabia serizy?
Toy ny voatabia lehibe, ny voatabia serizy dia manana vitamina sy mineraly maro, fa dia ankasitrahana indrindra amin'ny fandraisany anjara amin'ny lycopene. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny lokony mena ary raisina ho iray amin'ireo antioksida voajanahary matanjaka indrindra. Ity fitambarana misy ao amin'ny sakafo izay mampiahiahy antsika amin'ity tranga ity dia mifandray amin'ny tombony lehibe. Ny Lycopene dia hampihena ny risika homamiadana, ary koa ny aretim-po.
Ho an'ny fitambaran'ny sakafo voatabia serizy, ny habetsahan'ny kaloria, proteinina, gliosida ary fibre (isaky ny sakafo 100 grama) dia ireto manaraka ireto:
0.88 g proteinina
4 g gliosida
1 h ny fibre
Tombony voatabia Cherry
Ny fampidirana voatabia serizy amin'ny sakafonao dia mifandray amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany. Ireto misy tombony valo azo avy amin'ny voatabia serizy. Marihina fa, toy ny sakafo rehetra, ilaina ny mihinana sakafo voalanjalanja mba hanararaotana ny fananana rehetra:
Manemotra ny fahanterana
Manampy amin'ny famoizana lanja
Mifehy ny haavon'ny kolesterola
Mampihena ny fanahiana
Mampihena ny risika homamiadana sy aretim-po
Mampihena ny manodidina ny andilana
Mitazona ny hoditra, taolana ary volo amin'ny toerana tsara
Manakana ny olana mifandray amin'ny fahitana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Ny tombony valo an'ny voatabia serizy
Mpandoro tavy voajanahary